Usoro ahụ ike na France: ahụike ọha na eze, ibe, nkwado
Usoro ahụike French: nchedo, ụgwọ, nkwado
Edere site Tranquillus | June 11, 2018 | Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
Na France, ahụike ọha nwere nnukwu ihe ùgwù. Ọnụ ọgụgụ dị mma nke ụlọ ọrụ ahụike bụ ọha na eze, ọgwụgwọ ahụ na-arụkwa ọrụ nke ọma. Òtù Ahụ Ike Ụwa na-amata usoro ahụike French dị ka nke kachasị arụ ọrụ nke ọma n'ihe gbasara nhazi nlekọta ahụike na oge ya.
Kedu ka usoro nlekọta ahụike French si arụ ọrụ?
Atọ nke nlekọta na-eme ka usoro nlekọta ahụike French.
Atụmatụ a chọrọ
Ọkwa dị iche iche dị iche iche na-eme ka atụmatụ mkpuchi ahụike dị mkpa. Mmadụ atọ bụ ndị isi na ndị ọzọ, nke a kapịrị ọnụ karị, biara na ya.
Ya mere, anyị na-ahụ atụmatụ izugbe nke taa na-ekpuchi mmadụ anọ n'ime mmadụ ise na France (ndị lara ezumike nka na ngalaba ndị ọrụ nzuzo, ndị ọrụ, ndị ọrụ nkwekọrịta). Atụmatụ a na-ekpuchi 75% nke ụgwọ ahụike yana CNAMTS (ego mkpuchi mkpuchi ahụike nke mba maka ndị ọrụ akwụ ụgwọ).
Ọchịchị nke abụọ bụ usoro ọrụ ugbo nke na-ekpuchi ndị ọrụ ego na ndị ọrụ ugbo. MSA (Mutualité Sociale Agricole) na-elekọta ya. N'ikpeazụ, a na-ezubere ọchịchị nke atọ maka ọrụ onwe onye. Ọ na-ekpuchi ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọrụ ndị na-emesapụ aka, ndị ahịa na ndị omenkà.
Atụmatụ ndị ọzọ pụrụ iche metụtara ndị ọkachamara dịka SNCF, EDF-GDF ma ọ bụ Banque de France.
Ndị ọrụ insurers na-enye ndị nkwekọrịta ahụ ike ahụ. Uru ndị a na-erite ga-emezigharị ihe ndị akwụ ụgwọ ahụ nyere n'aka Health Insurance. N'ụzọ doro anya, ahụike zuru ezu site na reimbursements maka mmefu ahụike nke Social Security anaghị ekpuchi.
A na-ahụkarị ụlọ ọrụ mkpuchi ahụike na-ahụkarị n'ụdị mmekọrịta na sistemụ ahụike French. Ha niile nwere otu ebumnobi: iji hụ na mkpuchi mkpuchi ụgwọ ka mma. Nkwekorita niile nwere nkọwa nke aka ha.
GỤỌ Developmentnye Ọzụzụ Ọmụmụ Nkwado Ọkachamara
Ebumnuche nke atọ nke usoro nlekọta ahụike French bụ maka ndị chọrọ ịmalite iwusi elu ha. Ọtụtụ mgbe, ha na-elekwasị anya n'ọnọdụ ụfọdụ dịka ọgwụ ma ọ bụ dentures.
Enwetara insurances bụ nkwa zuru ezu nke na-agbakwunye mkpuchi nkwenye ma ọ bụ mkpuchi ibe. A na-enye ndị ụlọ ọrụ mkpuchi, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ inyeaka ụgwọ ọrụ reimbursement.
Ahụike ọha na eze na France
Ahụike ọha mmadụ anọwo na-abụ ihe dị mkpa na France. Enwere nchedo nchedo onwe onye site na nchegbu a iji nye ndi amaala na ndi bi na obodo ndi nwere nlekọta ahuike na ike inweta ya.
Ndị dọkịta na-agwọ ọrịa nwere ozi iji soro usoro ndị ọrịa ha. Ha na-ele ha anya mgbe niile. A na-akwụghachi onye nlekọta na-ahụ anya mgbe ọ kwupụtara na ọrụ ya bụ inye ndị ọkachamara ndụmọdụ mgbe ọ dị mkpa.
Doctorsdị dọkịta dị abụọ: ndị na-asọpụrụ ego mkpuchi ahụike na ndị na-esetịpụrụ onwe ha ụgwọ ha.
Nchedo nchekwa na kaadị dị mkpa
Ịnweta usoro nchebe ọha na eze na-enye ohere maka ịkwụsịghachi ụgwọ ọrụ nke ụgwọ nlekọta. Ihe nkwụnye ụgwọ a bụ ego fọdụrụ nke onye ọrịa ahụ na-ebu, ma ọ bụ onye nkwado (ma ọ bụ ibe ya).
Ndị niile so n'Òtù Ahụ Ike Ahụike nke Otu nwere kaadi dị mkpa. Ọ dị mkpa maka ịkwụsịghachi ụgwọ ahụike. N'ihi ya, ọtụtụ ndị ọkachamara nabatara ya.
CMU ma ọ bụ mkpuchi Uche Ụwa
Ebum n'uche CMU maka ndị bi na France maka ihe karịrị ọnwa atọ. Nke a bụ Universal Health Coverage. Ọ na-enye onye ọ bụla aka irite uru site n'aka nchebe ọha na eze ma ya mere a ga-akwụghachi ya ụgwọ ego ha. Ụfọdụ ndị mmadụ nwekwara ike ịrite uru site na ntinye aka, gụnyere Elu Ahụ Ike Eluigwe na Ala, n'okpuru ụfọdụ ọnọdụ.
Ọrụ nke otu n'ime usoro ahụ ike
Na France, otu a bụ otu nke na-enye uru ahụike, ịdị n'otu, ọdịmma na enyemaka aka n'etiti ndị òtù ya site na onyinye ha. N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị òtù na-ahọrọ na-ahọpụta mbadamba na mgbe ahụ na-elekọta ibe.
Usoro ahụike maka ndị ọpụpụ
Nkwekọrịta dị irè n'etiti mba 27 nke European Union: a ga-enyerịrị ndị amaala amụma mkpuchi, mana enweghị ike ịnshọransị ugboro abụọ.
Onye ọhụụ ma ọ bụ onye ọrụ nke abụọ
Ndị na-ejikọta na atụmatụ nchedo ọha na eze nke mba na-abụghị akụkụ nke EEA (European Economic Area) na onye biri na France dịka onye ọrụ ma ọ bụ onye ọrụ onwe ya ga-etinye aka na nchekwa mmadụ. N'ihi ya, ha na-efunahụ ha dị ka ndị mmekọ na mba ha. Nke a dịkwa irè maka ndị na-ejide ohere dị ogologo.
Nke abuo, ntinye nke onye na-arụ ọrụ na France enweghị ike ịgafe oge abụọ. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ọ dị mkpa ịnweta visa ogologo oge. Onye ọrụ a na-enye ọrụ na-erite uru mgbe niile site na nchekwa nchedo obodo nke obodo ya. Otú ahụ ka ọ dịkwa ndị ohu obodo.
Generallymụ akwụkwọ kwesịrị ịdị mkpa ịnweta visa nwa oge ịbanye France. A na-echezi ihe mkpuchi a maka ụmụ akwụkwọ a: nchekwa nchekwa ụmụ akwụkwọ. Ikike obibi nke nwa akwụkwọ mba ọzọ ga-abụrịrị ụbọchị yana ọ ga-erughị afọ 28.
A na-agbazi otu nchedo ọha na eze ugbu a maka ụmụ akwụkwọ niile si mba ndị ọzọ na European Union. Maka ndị ọzọ, idebanye aha na atụmatụ a abụghị ihe iwu ma ọ bụrụ na ha ejide Kaadị Ịgba Ọrịa European na-ekpuchi oge ọmụmụ ha na France.
Ya mere, ụmụ akwụkwọ karịa 28 ga-esonyere ego ego mkpuchi isi.
Ndị European pensioners na-achọ ịbanye na France nwere ike ịnyefe ikike ha maka mkpuchi ahụike. Maka ndị na-abụghị ndị Europe, ọ gaghị ekwe omume ịnyefe ikikere ndị a. Ndenye aha na mkpuchi onwe gị ga-adị mkpa.
Usoro nlekọta ahụike France, na ahụike ọha na eze n'ozuzu ya, bụ ihe ndị dị na France. Ọ dị mkpa ịmụta ihe ndị dị mkpa ị ga-eme mgbe ịchọrọ iji dozie na France maka oge ma ọ bụ obere oge. Enwere ihe ngwọta ọ bụla maka ọnọdụ ọ bụla.
Usoro ahụike French: nchedo, ụgwọ, nkwado August 23rd, 2018Tranquillus
gara agaKedu ihe mere ị ga - esi pụọ na nkata ahụ?
-esonụOtu esi eme ka ndi mmadu nwekwuo ike n'oru oru